ဖလော်ရီဒါမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လိုဖြစ်နေတဲ့ မိကျောင်းလူသား ဂျိတ် ဆိုတာလူတွေပြောပြောနေ တာကြာပါပြီ။လူတစ်ပိုင်း မိကျောင်းတစ်ပိုင်းနဲ့၊ပါးစပ်ပြောပြောနေကြတာပေါ့။ ကိုယ်တိုင်မြင် ဖူး တဲ့သူတွေကလဲ ရှိတာပေါ့။တော်တော်များများက မယုံကြပါဘူး။
အခုတော့ အဲဒါကို သက်သေ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြနိုင်ပါပြီ။ ၁၉၆၇ တစ်ဝှိုက်က Marian နဲ့ Junior Marsh တို့နှစ်ဦးဟာ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်အဖြစ်မှန်လိုက်စုံစမ်းရာကနေ ကမ်းခြေရွာတစ်ရွာက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းစုစောင်းသူထံကနေ ဒေါ်လာ ၇၅၀ နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။မံမီ ဖြစ်နေတဲ့အလောင်းဖြစ်ပါတယ်။Marsh က အဲဒီ အလောင်းကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပြီး မိကျောင်းပုံပါတဲ့ ပို့စကဒ်ပေါင်း သုံးသောင်းကျော် ရောင်းရခဲ့ရပါတယ်။
အခုတော့ မိကျောင်းလူသားက အမျိုးသားရတနာဖြစ်သွားပါပြီ။
Credit to ====>မောင်စိုင်း(ကနောင်)
Posted by 925 at 21:09 1 comments
ကြပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဟာတာတာခံစားနေရတယ်။ သူမကို သူတစ်ချက်ကြည့်ပြီး….
“ကောင်းပြီလေ… “ကွာရှင်းဟိုတယ် (Divorce hotel)” ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အသစ် ဖွင့်ထားတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒီ”ကွာရှင်း
ဟိုတယ်”က ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးစ ဇနီးမောင်နှံတွေ နောက်ဆုံးတစ်နပ်အတွက်သီးသန့်ဖွင့်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ပါတဲ့။ အဲဒီမှာ သွားစား
ရအောင်” သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး သူမပြောတယ်။သူခေါင်းညိတ်ပြီး နှစ်ဦးသားနှုတ်ဆိတ်လို့ ဟိုတယ်ထဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်
“ဆောရီး….. ကျွန်မတို့ ကွာရှင်းဟိုတယ်မှာ စည်းကမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီညစာကို မိန်းမဖြစ်သူက ယောက်ျားကြိုက်တတ်တာတွေ
မှာပေးရသလို ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်း မိန်းမကြိုက်တတ်တာတွေကို မှာပေးရပါတယ်။ ဒါကို “နောက်ဆုံးအမှတ်တရ” လို့ ခေါ်ပါတယ်”
“ငါးပေါင်းတစ်ပွဲ၊ မှိုကြော်တစ်ပွဲ၊ မှိုနားရွက်သုပ်တစ်ပွဲ.. ဒီဟင်းတွေအားလုံး ဂျင်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြု မထည့်နဲ့နော်။ ကျွန်မအမျိုးသား….
အော်.. ဒီအမျိုးသားက အဲတာတွေမစားဘူး”
၀န်ထမ်းကောင်မလေးက ရယ်ပြီး “တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျွန်မတို့ ကွာရှင်းဟိုတယ်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ညစာလာစားကြတဲ့
ဇနီးမောင်နှံတွေက ဘာမှ စားချင်စိတ်ရှိကြတော့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ”နောက်ဆုံးအမှတ်တရ” ကို မစားကြတော့ဘဲ
တိုင်းက ဒါကို မငြင်းဘဲ မှာကြတယ်”
“လူကြီးမင်း… သူ့ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့အဖြစ်ကို မှတ်မိသေးလား? အခု အရာအားလုံးက ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ လင်မယား
မဟုတ်တော့လည်း သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလို့ရတယ်။ သူ့ကို နှင်းဆီတစ်ပွင့် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဦး”
“ဒီနှင်းဆီပွင့်က ကျွန်မတို့ ဟိုတယ်က ကောက်ညှင်းနဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ နှင်းဆီတွေပါ။ ဒါဟာလည်း လူကြီးမင်းတို့အတွက် တတိယမြောက်
စားစရာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကို “ရောင်ပြန်အလှ” လို့ခေါ်တယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဖြေးဖြေးသုံးဆောင်ကြပါ။ လိုအပ်ရင် ကျွန်မကိုခေါ်လိုက်ပါ”
“ဆောရီး… လူကြီးမင်းတို့ကို ထိတ်လန့်စေခဲ့ပြီ။ ဟိုတယ်ကြီး မီးမလောင်ပါဘူး။ အခန်းထဲ မီးခိုးတွေကို တမင်လွတ်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့
စတုတ္ထမြောက်ဟင်းပါပဲ။ ဒါကို “ရင်ထဲက ရွေးချယ်ခြင်း” လို့ ခေါ်တယ်။ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်နိုင်ပါပြီ”
“ဟန်နီ… ၀န်ထမ်းကောင်မလေး ပြောတာမှန်တယ်။ အခုနားက ဟန်နီနဲ့မောင်ရဲ့ တကယ့်ရင်ထဲက ရွေးချယ်တာတွေဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့
မောင်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မခွဲနိုင်ကြဘူး။ မနက်ဖြန် မောင်တို့မင်္ဂလာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ကွာ”
“ဆန္ဒရှိတာပေါ့။ အခု ဘာမဆို မောင်နားလည်သဘောပေါက်လာပြီ ဟန်နီ။ မောင်တို့ မနက်ဖြန် အစောကြီး မင်္ဂလာဆောင်ရအောင်ကွာ။ ရှင်းမယ်ဟေ့….”
Posted by 925 at 02:560comments
ရဲယိုရွက်ခပ် ရင့်ရင့် ငါးရွက်ခန့်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှီးပြီး
အအေးခံပြီး ခေါင်းလျှော်ပါ။ တစ်ပတ်လျှင်နစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် တစ်လခန့်လျှော်ပါ။
Posted by 925 at 19:420comments
England (W) - Ireland (W)